Mootummaan waayyaannee seera qabeesa miti, seeraan ala, Faashistiidha.
Mootummaa akkasii waliin marii, araarriifi gaaffii haqaa illee gaafachuun deebiin isaa du’a ofitti murteessuudha. Namni karaa nagaa mirga isaa argachuu jibbu hinjiru. Waayyaannee irraa gaaffii seeraan gaafattee deebii ati argattu hinjiru. Dhaabbilee Oromoo dhiisii, qeerroo Oromoo dhiisaatii qaama TPLF kan ta’an gartuun Sayee Abraha, Alemsagad Gabiramlakiifi, Gabru Asiraatfaa gaaffii dhiyessaniif deebii isaan argatan arginee jirra. TPLF waliin mari’achuun waliin hojjechuu nidandeenya jedhanii dhaabbileen Oromoo biyya seenan kaan mana hidhaatti darbataman, kaan biyyaa ari’aman. TPLF amanuun ofsalphisuudha. Kanaafuu gaaffiin keenya gaaffii haqaati. Waan wal gowwoomsuu yaallu ykn waan irraa ofqusannu illee hinjiru. TPLF gaaffii enyuufillee karaa nagaa deebisa jedhanii yaaduun gowwummaadha. Habashoonni moofaan ammoo gaaffii akkasii hingaafatinaa, alaabaa akkasii hinbatinaa, yoo nuun jedhan waan dhageenyuuf hinqabnu; waan nu fayyadanis hinqaban.
Waayyaanneen dhaaba seera addunyaafi seera mataa isaatii baase illee hinkabajne; qawwee qofatti amanuudha. Waayyaanneen Qeerroo Oromoofi barattoota Oromoo waan hunda fayyadamee balleesuuf kan deemu malee mariitti kan deemuu miti. Akkuma beekamu qaamni hedduun sochii qeerroon biyya keessaa godhu irratti kan busheessuuf yaalu lakkoobsaan hinyaratu. Keessumaa ilaalcha akkasii kana kan qaban biyya alaa keessa guutanii jiru. Ofii keekii nyaachaa ijoollee Oromoo gara qullaa diina dura dhaabatte irratti dhagaa darbuurra waan sirreeffachuu qaban sirreessuudha. Gartuun sochii barattoota keenyaafi Qeerroo Oromoo gargaaruufi dogoggora jiru illee sirreessuuf gorsa deggarsaa gochuuf yaalanis jiru. Kan wangeela (Macaafa Qulqulluu) fudhatee Qeerroo (dhaabbilee Oromoo)fi waayyaanneen walitti araarsa jedhee kan gara biyya adeemus akka jiru qeerron ganama barii nuuf dhaamanii jiru.
Kanaafuu, Waayyaanneen dhaaba marii karaa nagaa godhamu hinfudhanne ta’uu erga beeknee, waan jedhe illee kan hinkabajne ta’uu erga hubannee, Maaster Pilaanii dhaabeera erga jedhee booda qonnaan bulaa hedduu akka ariifachiisaan buqqisaa jiraniifi Finfinnee babal’isuun ammayyuu gaaffii tokko malee Adaamaa ga’aa jirachuu argina. Dhiigni ijoollee Oromoo dhangala’uun guyyaa tokkoof illee hindhaabbanne. Barattoonniifi barsiisonni hidhamuun ittuma fufee jira. Mirgi Oromoo eegamaa hinjiru. Oromiyaan waraana biyyoolessaa jala bulaa jirti. Barattoonni Oromoo waggaa guutuu utuu hinbaratin dirqama qormaata fudhadhaa jedhee mootummaan dirqama akkasii baasuun ijoollee Oromoo jaarraa tokko guutuu balleessuuf deema. Kana qofas miti, Uummata keenya bishaan dhugaatii dhorkatee qonna abaaboo tokkicha waggaati bishaan litira Biliyoona 5 obaasa. Uummanni Buraayyuu garuu dheebotaa jira. Waayyaannee gaaffii bishaan dhugaatii uummata Oromoof kan hindeebifne, gaaffii mirgaafi aangoo qooddachuu gaafachuun of xiiqqeesuudha. Gaaffilee kana TPLF dhiyeessuun Bu’aa qabaa?
Mirgi ofiin of bulchuu nuuf haakabajamuu?
Gaaffii mirga abba biyyummaaf deebiin nuuf haakenamu?
Mootummaan ce’umsaa nuuf haahundeefamuu ?
Anga’oonni TPLF/OPDO seeratti dhiyaachuu qabuu?
Warri Ijoollee Oromoo 750 ajjeese seeratti haadhiyaatan?
Gaaffiin haakabajamuu, haakenamu, haahundeefamuu, seeratti dhiyaachuu qabuu, seeratti haadhiyaatan jeedhufi kkf gaafi dha yoo ta’ee siiri miti, dhadannoo ta’uu qaba, feedhi fi murte saba Oromoo argisisuu qaba malee gaafi ta'uu hin qabu. Gaaffiin kun Maqaa Barattoota Oromoofi Qeerroo Oromoon dhiyaachuu hinqabu. Sababnisaa gababati:
TPLF mootummaa mirga of ofiin murteeffachuuf hayyama latuu miti. Kanafuu, mootummaa kana irraa mirga gaafatuu hinjiru;
Mootumman kun ilaafi ilaamee hinbeeku; mirga sabaa kabajee hinbeeku. Mirga abbaa biyyuumaa Oromoo TPLF gaafachuun waan argatamu miti.
Mootummaa Ce’umsaa yeroo baay’ee yaalamee ergasii guyyaa hunda, sa’aa hunda, dhiigi Oromoo dhangala’aa jira. Gaaffiin kun rakko Oromoo achi dheeressa malee furmata tokko ilee hinqabuuf, Mootuumma du’’e fayyisuuf ykn mana hidha diigama jiruu deebifne ijaruuf hin yaaluu (diigamuu qaba)
Mootummaan kun seera qabeessa miti (sagalee uummata humnaan kan saameedha malee, addunyaadhumarra 100% mo’achuun hinjiru) utuu dhugaa ta’ee Oromoo mormii kaasee dhiigasaa hindhangalaasu ture. sabi Ethiopia TPLFn hinfilanne; seera qabeessa miti.
Bakka seerriifi heerri mootummaa hinkabajamnetti TPLF eenyuun illee nama isaa seeratti dhiyeessee hinbeeku. Sichis hindhiyeessu.
Maal wayyaree? naan jechuun keessan hinooluu, hadhoofte illee haqa walitti himuu qabna. Xoophiyaa diimokraatessuu ykn suphuun hindandamu. Biyyi kun baroota 150 dhiiga Oromoo dhugaa jirti. Xoophiyaan kan kush (Oromoo) yoo taatellee kana booda ijoolleen Oromoo maqaa Xoophiyaatiin dhiignishee dhangala’uu hinqabu. Haati keenya kana caalaa boo’uu hinqabdu. Yeroo jalqabaaf sirna Habashaa keessati hojii boonsaa warra hojjeetan ijoollee Oromoo qaroo hojii isaan dhoksuu hinqabnu. Keenya ta’uusaanii haaluu hinqabnu. Gumacha isaan Oromoof godhanillee haalamuu hinqabu. Kanaafan sodaa tokko malee seenaa Dr. Haile Fida faa dhokchuu hinqabuu jedhee bareessee ture. Kana jeechuun koo kayyoon Toophiyaa diimokraatesuufi suphuu sun siiridha jeechu koo miti. Toophiyaa diimokirateesuuf wareggama Oromoon basee biyyi tokkollee baasee hinbeeku. EPRP ijoolee Oromoo (MEISON) dabballeedhaa kaaftee haga Dr. Hailee Fidaatti galaafattee jirti. Habashaan waan hojeettu nibeekti. Dr. Haayilee Fidaa fi Ijoollee MEISOn kan ficcisiise warruma isaan bira ture ergasi Dargiti harka kennatedha. Kanaafuu, haraasii Pirojeekta duulomee kufee deebisanii kasuuf warri deeman jiraachuu malu. Garuu Qeerroo Baratoota Oromoo isaan keessa akka hinjiree 100% nan mirkanessa. Qeerroon Toophiyaa haromsuuf miti kan du’aa jirtu. Kanaafuu, warri Dhaadannoo hintaane Qeerrootti maxxansitan utuu dhiiftanii wayya. Barattoonnni Oromoofi Uummanni Oromoo kan wareegama kafalaa jiruuf “Oromoo Bilisoomsee Oromiyaa Walabaa ijarrachuuf” malee, TPLF ykn Neo-Minilikanii waliin Angoo qooddachuuf miti.
Walumaagalatti, Qeerroon Oromoofi Barattoonni Oromoo Qabsoo haqa geggeessaa jiru. Gaaffiinsaani haqa-qabeessa Mootummaa kana buqqisanii Abbaa biyyuumaa Oromoo mirkanesuudha. Kanaaf yaada fi hojin gargaruu, waan hundan birra dhaabbachuudha. Dhaadannoo garaarti siirachuu qaba kan jenneefsi kaayyoo qeerroo waliin akka wal simatuuf. Namoonni tokko tokko garuu dhiiga ijoolee Oromoon Habasha waliin ykn Warra biyya dhiyaa wagga 150 garbuma Oromoo mirkanessa jiraatan gammachiisuuf dhaadannoo qeerroo akka fakkeenyaatti fudhatanii, “Kottaa mootummaa ce’umsaa waliin ijaarrannaa” jedhanii dhiiga ijoole Oromoo lola’aa jiru irratti Mariif olii gadi warri kaatan dhaabadh jeena. Abbootii Gadaa warri ofiin jeedhanis, Haile Mariyam Desalenyi bira adeeman ilee ni saxilaman qeesiin, sheekin, dhaabbi siyaasa ykn ‘actvist’n Oromoollee dhiiga ijoollee Oromoo Sirna Toophiyaa saamee tortoree diigamaa jiru ittiin ijaaruuf yaaluun fafa. Hundi waan hubachuu qabu tokkotuu jira inisi Abban Qabsoo uumata Oromooti malee dhaabba kamuu ykn nama kamuu miti, wareegama kan kafalee uumata Oromooti kanaafu Minisoota fi DC teenye QBO wareegami gudan itti kafalame ni jijiraa yoo jeetan nami caalisuu hin jiru. Qeerroon diina dura dhaabatee lolaa jirtu waan hojeettu nibeekti. Qabsoo biyya keessaa kan geggessu, hogganuu qabuufi ittigafatamuullee kan qabuu isaanuma abidda sana keessa jiran ta’uu qaba.